घर युरोपियन स्टार एडिन Dzeko बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को प्रस्तुत गर्दछ जसले सर्वोत्तम उपनाम द्वारा जान्छ; "बोस्नियाई डायमण्ड"। हाम्रो एडिन Dzeko बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्यहरूले तपाईंलाई आफ्नो बचपनको समय सम्म उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता ल्याउँछ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनको बारे मा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र अनलाईन भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले उनीहरूको हिसाब क्षमताको बारेमा चिन्ता छ तर हाम्रो एडिन जिकोको बियोमा धेरै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
एडिन Dzeko बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
एडिन जकोको साराजेवो, बोस्निया र हर्जेगोविना मा मार्च 17 को 1986th दिनमा जन्मेको थियो। उहाँ आफ्नो आमा, बेलमा डिस्को र बुबा, मिडटट डिस्कोको जन्म भएको थियो।
एडिन डुकोको बचपन कथा साहस र शक्तिको उत्कृष्टता हो। यो एक केटाको कथा हो जसले बुलेट छेदबाट बगेको फुटबल संसारको शीर्षमा बनाउँदछ। यदि यो उनको आमा बेलमा थिएन, जो आफ्नो सानो बच्चा केटा को मैदान मा फुटबल खेल्न जाने केहि रोक दिए पछि केहि मिनेट पछि बमोजिम, हामी एडिन Džeko को क्षेत्र ले उठन या उनको चेल्सी एफसी ट्रांसफर अपडेट को साक्षी कभी नहीं । यो घटना बाल्कन युद्धको दिनको दौडान भयो।
यो 1992 मा फिर्ता जान्छ, बोस्नियाई आजादी को युद्ध जो तीन वर्ष सम्म 1995 सम्म फैल्यो। यो बक्सन इतिहासको सबैभन्दा सबैभन्दा डरलाग्दो कङ्गन मध्ये एक थियो जस्तै बोस्निया सर्ब्स र क्रोट्सले आदिवासीता विरुद्ध लड्यो। Sarajevo, बोस्निया र हर्जेगोविना र गृहनगर मा एडिन डीजेको को राजधानी युद्ध देखि सबै भन्दा खराब क्षतिग्रस्त स्थानहरु मध्ये एक थियो। उहाँले एक बच्चाको रूपमा जीवनको लागि संघर्ष र फुटबल बिराटनगरमा सबैभन्दा लोकप्रिय नाउँहरूमा बनाउन को लागी।
एडिन Dzeko बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
31 मार्च 2014 Džeko उनको प्रेमिका अमरा सिलाजदीकी जो एक बोस्नियाई मोडेल र अभिनेत्री हो। त्यो उनको मान्छे भन्दा दुई वर्ष भन्दा पुरानो छ।
अम्रा एक पटक एक जवान सर्बिया व्यवसायी, व्लादिमीर विवेजेजेजेजीकी थिइन्, जसको साथ उनीसँग सोह्र वर्षकी छोरी सोफिया थिए। उनीहरूले दुई जनालाई एहसास गरे कि एक राम्रो तलाक एक खराब विवाह भन्दा राम्रो थियो र सबैले आफ्नो बाटोमा गए।
प्रेम सम्बन्ध अमरे सिलाजदीकी र एडिना डिजाका 2012 मा सुरू भयो जब तिनी मचेस्टर शहरमा थिए। लगभग एक वर्ष उनीहरूले उनीहरूको सम्बन्धमा सोचेका थिए, उनीहरू चुप लागेका थिए, र तिनीहरूको सम्बन्ध चहचहानामा फोटोहरू साझा गरेर घोषणा गरिएको थियो।
2016 फेब्रुअरीमा, उनी युना नामक केटीको बुबा बने। उनको दोस्रो बच्चा, डेन नामक एक केटा, सेप्टेम्बर 2017 मा जन्मिएको थियो।
एडिन Dzeko बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
एडिन ज्याकोले भने कि उनको परिवार सधै आफ्नो क्यारियरमा सहायक थिए, विशेषतया आफ्नो बुबा, जसले उनलाई प्रशिक्षण सत्रमा लिनुभयो जब उनी Željezničar मा थियो।
उनको बुबाले बोसेनिया र हर्जेगोविनामा व्यावसायिक रूपमा खेले। Džeko Snr Sarajevo मा सुपरस्टार मानिन्छ।
सिस्टर: मेरिमिडे डिकोको एडिन जकोको जस्तो देखिन्छ। उनी केवल तिनका भाइबहिनी होइनन् तर तिनको बचपन पनि राम्रो मित्र होइन किनभने दुवै बढ्दै गर्दा धेरै समय बित्यो।
तल तथ्य तथ्यको अभिव्यक्ति हो कि एडिन र मेरिमेका साथीहरू भन्दा राम्रो थिए।
माथिको फोटो बोस्नियामा लगाइएको थियो।
एडिन Dzeko बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -व्यक्तित्व
हामीले एडिन डकोको उनको व्यक्तित्वको निम्न विशेषताहरू पाएका छौं।
एडिन जकोको शक्ति: उहाँ दयालु, कलात्मक, सहज, सज्जन, बुद्धि र धेरै संगीत हुनुहुन्छ।
एडिन जकोको कमजोरीहरू: एडिन डरलाग्दो हुन सक्छ, धेरैमाथि भरोसा राख्नुपर्दछ, कहिलेकाहिँ कहिलेकाहीँ थोरै कारणबाट उदास हुन्छ र वास्तविकताबाट बचाउन चाहानुहुन्छ।
कुन एडिन जकोको मनपर्छ: एक्लै हुनु, सुत्न, संगीत, रोमान्स, भिजुअल मिडिया र आध्यात्मिक विषयहरू
कुन एडिन Dzeko नापसंद: थाहा छ, सबै आलोचना गरिरहेको छ, अतीत आउँदै तिनलाई हान्न र कुनै पनि प्रकारको दुर्व्यवहारको रूपमा तिनले बोइसियन युद्धमा देखाएका थिए।
संक्षेपमा, एडिन जकोको धेरै मित्रवत छ र अक्सर आफूलाई फरक फरक व्यक्तिको कम्पनीमा भेट्टाउनुहोस्। उहाँ पनि निस्सन्देह हुनुहुन्छ, सधैं अरूलाई मदत गर्न इच्छुक छ, पछाडी केहि पनि प्राप्त गर्न आशा बिना। उहाँको भावनात्मक क्षमताले उनीहरूको समग्रता बढाउँछ।
एडिन Dzeko बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -तल शर्टहरू छोड्दै
एडिन जकोको एकपटक ग्यालेक्सीको साथमा युनियनसँगको खेलको खेलमा एक विचित्र मोड़मा एक विरोधी खेलाडीको शर्ट हटाउनको लागी जो 2016 वर्षमा भयो। बोस्निया-हर्जेगोविना कप्तानले पछि फर्केर हेरेपछि रातो रात हेरे।
यो घटना विश्व कप क्वालिफायरको अन्तिम 10 मिनेटमा भयो जब Dzeko को टीम 1-0 को नेतृत्व भयो। यो सुरु भएको बेला बेलायतको पहिले म्यानचेस्टर सिटी प्लेयर, अहिले रोमानियामा मात्र विद्रोहीहरूको सजाय क्षेत्र बाहिर साइक्टिभिस पेपास्ताथोलौलोसबाट चुनौती भएको थियो। युनिभर्सिटीको शर्ट्सले ड्रेकोको कप्तानलाई पराजित गर्न कोसिस गरे र उनीहरूको पक्षमा खेलाडीको साथमा दुवै पक्षको टोलीले प्रविधिमा काम गर्न सकेन।
Dzeko, जो पहिले देखि नै पहेंलो कार्ड मा थियो, रेफरी, जोनास एरिक्सन द्वारा पठाएको थियो, जबकि Kyriakos Papadopoulos शुरुवात घटना पछि लडकियों मा धक्का को लागि सीधा लाल दिइएको थियो। ग्रीस चोट लागेको समयमा समकक्ष प्राप्त गर्न गएका दुवै टोलीले 10 पुरुषहरूलाई कम गरे।
"म कुनै कारणको लागि रातो कार्ड पाउनुभयो, म कअब किन," Dzeko पछि भन्नुभयो। "रेफरी भन्छु कि मैले सम्पूर्ण कुरा शुरु गरें, तर म फर्शमा मात्र एक्लै थिएँ, त्यसो भए मैले यो कसरि गर्न सक्छु?
उहाँले थप गर्नुभयो: "मैले 3-0 हराइरहेको जस्तो लाग्छ। ग्रीसले यो बिन्दुको योग्य थिएनन्। तिनीहरूले पनि 1-0 हानिको योग्यता गरेनन, उनीहरूले 4-0 गुमाउन योग्य छन्। "
एडिन Dzeko बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सामानको कथा
यसले धेरै प्रशंसकहरूलाई आफ्नो उडान ट्र्याकिङ एप्स र हवाईअड्डा जानकारी खोज्नको लागि केवल एडिन जेकको लन्डनको लागी आइपुग्दा आइपुगेको छ। सम्भवतः, उनको गन्तव्य, सर्री क्षेत्रमा कहीं हुनसक्छ, जुन ठाउँ हामी कोबोमको रूपमा जान सक्छौं, जहाँ सामान्यतया चेल्सी फुटबल क्लबको लागी चिकित्सक र चिन्हहरू भेटिन्छ। यो इटलीको मेडियाियस प्रीमियम च्यानल थियो जसले पहिले यो टुक्रा प्रकाशित गर्यो। तिनीहरूको रिपोर्ट भन्छन् कि Dzeko आफ्नो बहिनी, साथै उनको एजेन्ट सिल्भानो मार्टिना संग भएको थियो।
एडिन Dzeko बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सारांशमा क्यारियर
Džeko आफ्नो क्यारियर मा शुरू गर्यो Željezničar, 2003 र 2005 बीच मिडफिल्डरको रूपमा खेल्दै, तर त्यो स्थितिमा सानो सफलता खेलिरहेको छ। उहाँ व्यापक रूपमा धेरै लामो मानिन्छ, र गरीब प्राविधिक क्षमताहरूसँग। डेस्कोको कोचले भने, जिआररि प्लाज्स्केकले आफ्नो सम्भावना देखाए र जब प्लिस्केले घर फिर्ता गरे, उनले अर्को क्लब, टिप्लीसलाई गरीब बालकलाई खरीद गर्न सल्लाह दिए।
Željezničar Džeko को लागि एक € 25,000 को एक बोली स्वीकार गरे, एक Željniničar निर्देशकहरु मध्ये एक वर्ष पछि भन्छन्, "[हामी] सोचेको छ कि हामीले लटरी जी". उसले 2005 मा उस्टि नैड ल्याबेमसँग ऋण जादू गरेको थियो, जसको समयमा उनले 15 खेलहरूमा6गोल गरे। त्यस साल पछि, उहाँले टिप्लीस फर्कनुभयो, त्यहाँ 2007 सम्म रहन। 13 खेलहरूमा 30 लक्ष्यहरूसँग, उनी 2006-07 सीजनमा चेक लिगको दोस्रो-गोल गोलकर्ता थिए। उनको प्रदर्शनको कारण, VfL Wolfsburg प्रबन्धक फेलिक्स मगथले उनलाई €4मिलियनको लागि हस्ताक्षर गरे। उनले क्लबमा धेरै गोल गरे। यसले उनको नाम स्काउट्सको पहिलो खरीदारी सूचीमा बनायो।
भारी हिसाब पछि, मैनचेस्टर शहरका प्रबन्धक रोबर्टो मासिनीले3जनवरी 2011 मा पुष्टि गरे कि पाउन्ड एक्सएनमक्स मिलियन (€ 27 मिलियन) को शुल्क Wolfsburg को Džeko संग सहमति भएको थियो, जो शहरको दोस्रो उच्चतम स्थानान्तरण आंकडा थियो, पछि Robinhoको £ 32.5 मिलियन (€ 42.5 मिलियन) रियल म्याड्रिडबाट 2008 मा जानुहोस्। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अहिले इतिहास हो।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो एडिन Dzeko बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी वा ठाँउ दिनुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस!।
डिएगो कोस्टा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
जुन 25, 2016